Back and Neck Pain - Sushwastha Hospital
के तपाईंलाई कम्मर वा गर्दन दुख्ने समस्या छ?
कम्मर वा गर्दन दुख्नु भनेको के हो ?
कम्मर वा गर्दन दुख्नु कुनै रोग नभएर अरु रोगको कारण आउने लक्षण हो ।
कुन – कुन रोगले गर्दा कम्मर वा गर्दन दुख्छ ?
कम्मर वा गर्दन दुख्नुमा मेरुदण्ड, मांसपेसी र नसा (स्पाइनल नर्भ) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यी कुनै पनि भागमा समस्या हुँदा कम्मर वा गर्दन दुख्ने हुन्छ।
कम्मर वा गर्दनको मांसपेशीमा आउने खराबी
कम्मर वा गर्दन दुख्ने
डिजेनेरेटिभ चेन्ज (हड्डी खिइने समस्या)
मेरुदण्ड बाङ्गिने समस्या
मेरुदण्ड कडा हुने जस्ता समस्या
डिजेनेरेटिभ – मेरुदण्डको बीचमा रहेको डिस्कमा आउने समस्या
डिस्क डिजिज र डिस्क प्रोल्याप्सका कारण मेरुदण्डको भित्रबाट निस्कने नसाको जरा – नर्भ रुटमा दबाब पर्दा
मेरुदण्ड र यसको वरिपरिका अंगमा हुने संक्रमण
महिलामा पाठेघरको समस्या
मृगौला र त्यससँग सम्बन्धित अरु अंगहरुमा समस्या
यसका मुख्य कारणहरु के–के हुन् ?
मेरुदण्डको अत्याधिक प्रयोग
के समस्या हो भनेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
चिकित्सकले क्लिनिकल्ली जाँच गरेपछि नसाको समस्या पत्ता लगाउन सकिन्छ। क्लिनिकल्ली जाँच गर्दा, कम्मर वा गर्दनमा आउने दुखाइको प्रकृति, सहायक लक्षण र शारीरिक जाँचमा देखिने चिह्न कुन समस्याका कारण आउने दुखाइ हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसलाई निश्चित गर्नका लागि एक्स–रे, एमआरआई र केही रक्त परीक्षण पनि गर्ने गरिन्छ।
अत्यधिक दुखाइ छ भने दुखाइ कम गर्ने औषधि बाहेक प्राकृतिक चिकित्साका विविध थेरापी, अकुपंचर, अकुप्रेसर, फिजियोथेरापी र आयुर्वेदिक थेरापीबाट जुनसुकै समस्याका कारण आउने कम्मर वा गर्दन दुखाइको उपचार गर्न सकिन्छ।
यी थेरापीहरु कति समय गर्नुपर्ने हुन्छ ?
दुखाइको अवस्था, कारण अनुसारले फरक हुन्छ। सामान्यतया १० दिनदेखि ३० दिनसम्मको उपचारले निको पार्न सकिन्छ।
के सबैलाई निको हुन्छ ?
समस्याको कारण अनुसार फरक हुन्छ। प्राकृतिक तरिकाले उपचारका साथै आसनमा सुधार, नियमित व्यायाम, फिजियोथेरापिस्टले सिकाएको र चिकित्सकले भनेबमोजिम आराम गर्ने गरेमा कम्मर वा गर्दनको दुखाइ सधैंभरिका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।